YouTube inogadzirirawo yayo yepamhepo terevhizheni sevhisi | IPhone nhau
Runyerekupe nezve Apple kushambadzira terevhizheni sevhisi yamira zvishoma, zvirokwazvo mamwe makambani arikutungamira murudzi urwu rwebhizinesi, senge Hulu, iyo yakasimbisa kuti yayo yekushambadzira terevhizheni sevhisi yave kusvika parizvino. Kukona kona. Google haigone kusavapo, iyo inobatana nemapato ese aya, ichigara yakavanda kuseri kwemakambani epa satellite. Mune ino kesi zviri kumusoro kuYouTube, kubva kupi zvinoenderana nezvimwe zvakaburitswa mishumo, ivo vanofunga kutepfenyura terevhizheni kuburikidza nekushambadzira pasi pekunyoreswa kwakabhadharwa.
Kubuda kwacho kwakaburitswa na Bloomberg, Iyi svikiro yakasarudzika inopihwa kwazvo kuwana ruzivo rwusingazivikanwe nemunhu kuti rwunobva kupi, asi izvo zvinopedzisira zvave kururamisa kusvika pamwero mukuru. YeYouTube pairi kudiwa terevhizheni sevhisi ichazozivikanwa se "Unplugged" uye ivo vari kuisa pamberi vese vanogadzira mapurojekiti, nechinangwa chekuimisikidza zvakanyatsoitika muna 2017. Kune izvi, YouTube (Google - Alphabet) yaizobatana neCBS, NBC, FOX uye makambani akakosha ekuona pamwe nekuona nechinangwa chekuvandudza mhando yezvavanopa.
Hatizive kuti Google ichabatsirwa kusvika papi pachibvumirano chitsva ichi, zvakadaro, isu tichakamirira Tim Cook kuti ataure chimwe chinhu nezve Apple yekushambadzira terevhizheni sevhisi, sezvavakaita neApple TV, uko mhedzisiro pasina kupenga. kugadzira yeApple online mumhanzi sevhisi yechipiri yakanyanya kushandiswa uye inobatsira kwazvo pasirese. Izvo hazvizotishamisa isu kana izvo kana tichivhura munyika yeterevhizheni, Apple inoguma yawana mhedzisiro yakafanana, zvisinei, maframu akawandisa izvozvi akavhurwa muCupertino, tinowana Apple Pay mukuwedzera zvizere, kuvandudzwa kweiyo iPhone 7, kugadziridzwa kukuru kweApple Music uye zvimwe zvakawanda, uye isu tatoziva chirevo, ndiani anofukidza, zvishoma anodzvinya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » YouTube inogadzirirawo yayo yepamhepo terevhizheni sevhisi
Hacker kurwisa kunokanganisa mamirioni emaemail account. nguva yekuchinja password